သတင်း - သိပ္ပံနည်းကျ ဘဝ- ဂေဟစနစ်နှင့် လူ့ကျန်းမာရေး
သဘာဝ အကြောင်းရင်းများကြောင့် ဂေဟစနစ် ပျက်စီးခြင်းသည် လူ့အသက်နှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာများကို ကြီးမားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး ရောဂါဘယများပင် ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် သဘာဝအချက်များဖြင့် ဂေဟစနစ်ပျက်စီးခြင်းသည် မကြာခဏ ဒေသဆိုင်ရာလက္ခဏာများ ထင်ရှားရှိပြီး ဖြစ်ပွားမှုအကြိမ်ရေမှာ အတော်လေးနည်းပါးပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကဲ့သို့သော လူ့အကြောင်းအရင်းများသည် လူ့ဂေဟစနစ်ကို ပိုမိုဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးစေသည်။ ၎င်းသည် ပြင်းထန်ပြီး နာတာရှည် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည့် အတိုင်းအတာအမျိုးမျိုးကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး လူဦးရေတွင် ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကို တိုးလာစေကာ အနာဂတ်မျိုးဆက်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးအပေါ် ဆိုးရွားစွာ သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုသည် ဂေဟစနစ်ကို ဖျက်ဆီးရန် နိုင်ငံနယ်နိမိတ် မရှိပါ။ ၎င်းသည် ၎င်း၏နိုင်ငံကို ထိခိုက်စေရုံသာမက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ ပတ်၀န်းကျင်ကိုလည်း သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
1. ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပူပြင်းသောကိစ္စများ
1. ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနှင့် လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေး၊
ရာသီဥတုပူနွေးလာမှုကြောင့် ငှက်ဖျား၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေး၊ မိုးဝါပူ၊ ကြာဇံ၊ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်၊ ဝက်သက်စသည်ဖြင့် အပူပိုင်းဒေသတွင် ငှက်ဖျားရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း တိုးမြင့်လာပါသည်။ အအေးပိုင်းဒေသသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ တိုးချဲ့မှု။
2. အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးခြင်းနှင့် လူ့ကျန်းမာရေး၊
အိုဇုန်းလွှာ၏ အခန်းကဏ္ဍ- အောက်ဆီဂျင် မော်လီကျူးများကို ပြင်းထန်သော နေရောင်ခြည်ဖြင့် ဖြာထွက်စေသည်၊ အထူးသဖြင့် အိုဇုန်းထုတ်လုပ်ရန် လှိုင်းတိုခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ရောင်ခြည်များ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် အိုဇုန်းသည် လှိုင်းအလျား 340 nanometers အောက်ရှိသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး အိုဇုန်းကို အောက်ဆီဂျင်အက်တမ်များနှင့် အောက်ဆီဂျင်မော်လီကျူးများအဖြစ်သို့ ပြိုကွဲစေသောကြောင့် အိုဇုန်းလွှာရှိ အိုဇုန်းသည် ရွေ့လျားမျှတမှုကို အမြဲထိန်းသိမ်းထားသည်။ အိုဇုန်းလွှာသည် နေရောင်ခြည်မှ အန္တရာယ်ရှိသော လှိုင်းတိုခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အများစုကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး လူ့အသက်နှင့် ရှင်သန်မှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။ သုတေသနပြုချက်အရ အိုဇုန်းလွှာရှိ O3 ပမာဏ 1% လျော့ကျမှုတိုင်းအတွက်၊ လူဦးရေတွင် squamous cell carcinoma ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းသည် 2% မှ 3% အထိ တိုးလာနိုင်ပြီး လူ့အရေပြားကင်ဆာလူနာများလည်း 2% တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများနှင့် မျက်စိရောင်ရမ်းခြင်းများ၏ ဖျားနာမှုညွှန်းကိန်းသည် ညစ်ညမ်းသောနေရာများရှိ လူများတွင် တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ သက်ရှိအားလုံး၏ မျိုးရိုးဗီဇ၏ အခြေခံ DNA သည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးခြင်းသည် တိရစ္ဆာန်များနှင့် အပင်များ၏ မျိုးပွားမှုနှင့် မျိုးပွားမှုကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။
3. နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ် ညစ်ညမ်းမှုနှင့် လူ့ကျန်းမာရေး
နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်၊ နိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် အခြားနိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်များသည် သာမန်လေထုညစ်ညမ်းစေသည့်အရာများဖြစ်ပြီး အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါများကို လှုံ့ဆော်ပေးကာ ပြင်းထန်ပြီး နာတာရှည်အဆိပ်သင့်စေကာ လူ့ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
4. ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ညစ်ညမ်းမှုနှင့် လူ့ကျန်းမာရေး
ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်သည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်စေသည့်အချက်မှာ-
(၁) အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ယားယံခြင်း။ ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်သည် ရေတွင်ပျော်ဝင်လွယ်သည်။ ၎င်းသည်နှာခေါင်းပေါက်၊ လေပြွန်နှင့် bronchi တို့ကိုဖြတ်သန်းသွားသောအခါ၊ ၎င်းကို အများအားဖြင့် lumen ၏အတွင်းမြှေးပါးဖြင့် စုပ်ယူထိန်းသိမ်းထားပြီး ဆာလဖာရစ်အက်ဆစ်၊ ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်နှင့် ဆာလဖိတ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားကာ လှုံ့ဆော်မှုအားကောင်းစေပါသည်။
(၂) ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုန်အမွှားများ၏ ပေါင်းစပ်အဆိပ်။ ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုန်အမွှားများသည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ အတူတူဝင်ရောက်သည်။ Aerosol အမှုန်များသည် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို နက်ရှိုင်းသော အဆုတ်သို့ သယ်ဆောင်နိုင်ပြီး အဆိပ်သင့်မှုကို ၃-၄ ဆ တိုးစေသည်။ ထို့အပြင်၊ ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှုန်များတွင် သံထရိုအောက်ဆိုဒ်ကဲ့သို့သော သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများပါ၀င်သောအခါ၊ ၎င်းသည် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်တိုးမှုကို အက်ဆစ်အမှုန်အမွှားအဖြစ်သို့ လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပြီး အမှုန်များ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် စုပ်ယူကာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၏နက်ရှိုင်းသောအစိတ်အပိုင်းသို့ အစားထိုးဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ဆာလဖူရစ်အက်ဆစ်မြူခိုးငွေ့၏လှုံ့ဆော်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထက် ၁၀ ဆခန့်ပိုမိုအားကောင်းသည်။
(၃) ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၏ ကင်ဆာဖြစ်စေသော အာနိသင်ရှိသည်။ ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် 10 mg/m3 သည် carcinogen benzo[a]pyrene (Benzo(a)pyrene; 3,4-Benzypyrene) ၏ ကင်ဆာဖြစ်ပွားစေသော အာနိသင်များကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ကြောင်း တိရစ္ဆာန်စမ်းသပ်ချက်များအရ သိရသည်။ ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် benzo[a]pyrene တို့၏ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအောက်တွင်၊ တိရစ္ဆာန်အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုသည် ကင်ဆာတစ်မျိုးတည်းထက် ပိုများသည်။ ထို့အပြင် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်သည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသောအခါတွင် သွေးအတွင်းရှိ ဗီတာမင်များသည် ၎င်းနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ဗီတာမင် C ဟန်ချက်မညီမျှမှုကို ဖြစ်စေကာ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်သည် အချို့သော အင်ဇိုင်းများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို တားဆီး ဖျက်စီးနိုင်ပြီး ပရိုတင်းနှင့် သကြားဓာတ်တို့၏ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို ဖြစ်စေကာ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။
ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်သည် လေနှင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက် alveoli မှတဆင့် သွေးလည်ပတ်မှုအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက် သွေးထဲတွင် ဟေမိုဂလိုဘင် (Hb) နှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်နှင့် ဟေမိုဂလိုဘင်တို့၏ ဆက်စပ်မှုသည် အောက်ဆီဂျင်နှင့် ဟေမိုဂလိုဘင်ထက် အဆ ၂၀၀ မှ ၃၀၀ ပိုများသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သောအခါ၊ ၎င်းသည် ဟေမိုဂလိုဘင် (COHb) နှင့် အမြန်ပေါင်းစပ်ကာ အောက်ဆီဂျင်နှင့် ဟေမိုဂလိုဘင်ပေါင်းစပ်မှုကို တားဆီးကာ အောက်ဆီဂျင်ဟေမိုဂလိုဘင် (HbO2) ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ) hypoxia သည် ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် အဆိပ်သင့်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ မိနစ် 20 မှ 30 အတွင်း ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် ပြင်းအား 0.5% ကို ရှူရှိုက်မိပါက အဆိပ်သင့်သူသည် သွေးခုန်နှုန်း အားနည်းခြင်း၊ အသက်ရှု နှေးခြင်း နှင့် နောက်ဆုံးတွင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး သေဆုံးသည်အထိ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ပြင်းထန်သော ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် အဆိပ်သင့်ခြင်းမျိုးသည် အလုပ်ရုံ မတော်တဆမှုများနှင့် အိမ်၏ အပူဒဏ်ကို မရည်ရွယ်ဘဲ ဖြစ်တတ်ပါသည်။
2. အခန်းတွင်း ညစ်ညမ်းမှုနှင့် လူ့ကျန်းမာရေး
1. အဆောက်အဦအလှဆင်ပစ္စည်းများတွင်ပါရှိသော အန္တရာယ်ရှိသော အရာများ ညစ်ညမ်းခြင်း- သစ်သားအထပ်သား၊ ဆေးသုတ်ခြင်း၊ အပေါ်ယံပိုင်း၊ ကော်စသည်ဖြင့် ဖော်မယ်လ်ဒီဟိုက်များ အဆက်မပြတ် ထွက်လာပါသည်။ Formaldehyde သည် cytoplasmic toxicant ဖြစ်ပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ အစာခြေလမ်းကြောင်းနှင့် အရေပြားမှတဆင့် စုပ်ယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အရေပြားပေါ်တွင် ပြင်းထန်သောလှုံ့ဆော်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီး တစ်သျှူးပရိုတင်းများ၏ coagulation နှင့် necrosis ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်၊ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကို ဟန့်တားသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီး အဆုတ်ကင်ဆာလည်းဖြစ်သည်။ အလှဆင်ရာတွင်အသုံးပြုသော အမျိုးမျိုးသောပျော်ရည်များနှင့်ကော်များသည် benzene၊ toluene၊ xylene နှင့် trichloroethylene ကဲ့သို့သော မတည်ငြိမ်သောအော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများကို ညစ်ညမ်းစေနိုင်သည်။
2. မီးဖိုချောင်ညစ်ညမ်းမှု- ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့် မီးလောင်သောအခါတွင် အောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်မှုအခြေအနေအောက်တွင် လောင်စာအမျိုးမျိုးကို အပြည့်အဝလောင်ကျွမ်းစေပြီး polycyclic aromatic hydrocarbons အများအပြားကို ထုတ်ပေးပါသည်။ မွှေးကြိုင်သော ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များသည် 400 တွင် တဖြည်းဖြည်း ပိုလီမာဖြစ်လာသည် သို့မဟုတ် လည်ပတ်သည်။℃～800℃နှင့် ထုတ်လုပ်ထားသော benzo[α] Pyrene သည် ပြင်းထန်သော ကင်ဆာရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ချက်ပြုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ချက်ပြုတ်ဆီသည် မြင့်မားသောအပူချိန် 270 တွင် ပြိုကွဲသွားပါသည်။℃၎င်း၏မီးခိုးတွင် benzo ကဲ့သို့သော polycyclic မွှေးရနံ့ ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များပါရှိသည်။α]pyrene နှင့် benzanthracene။ ငါးနှင့် အသားကဲ့သို့သော အစားအစာများနှင့်အတူ ချက်ပြုတ်ထားသောဆီသည် အပူချိန်မြင့်မားသောအချိန်တွင် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ၊ Aldehydes၊ carboxylic acids၊ heterocyclic amines နှင့် အမျိုးပေါင်း 200 ကျော်၊ ၎င်းတို့၏ မျိုးရိုးဗီဇ အဆိပ်သင့်မှုသည် benzo ထက် များစွာ ကြီးမားသည်[α]pyrene။
3. အိမ်သာများနှင့် မြောင်းများမှ ထုတ်လွှတ်သော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလ်ဖိုင်ဒ်နှင့် မီသိုင်း မာကတ်တန်တို့သည်လည်း နာတာရှည် အဆိပ်သင့်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
4. အလှကုန်များ၊ နေ့စဉ်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ဓာတုပစ္စည်းများကို ညစ်ညမ်းစေခြင်း။
5. “အီလက်ထရွန်းနစ်မြူ” ညစ်ညမ်းမှု- လေအေးပေးစက်၊ ရောင်စုံတီဗီများ၊ ကွန်ပျူတာများ၊ ရေခဲသေတ္တာများ၊ မိတ္တူများ၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ၊ လှမ်းပြောလ်ကီများနှင့် အခြားအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများ—“အီလက်ထရွန်းနစ်မြူ” များကို ဒီဂရီအမျိုးမျိုးအထိ ထုတ်ပေးပါသည်။ “အီလက်ထရွန်းနစ်မြူ” သည် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အာရုံကြောများခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ကလေးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။
တင်ချိန်- အောက်တိုဘာ ၁၅-၂၀၂၁